Cidna Ha ka Sugin Inay ku Dhiiro Geliso, Sababtoo ah Waa Masuuliyad Ku Saaran! | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ismaaciil Ibraahim Hassan, March 1, 2020
Cabdijabaar Sh. Axmed — January 10, 2020
Ma ahan inaad isqariso ee waa inaad banaanka iskeentaa si aad wax u qabsato!
Inaad dedaasho waa waajib kaa saaran naftaafa. Waa xaqiiq jirta cidna kama sugaysid midaas. Waana waddooyinka kali ee aad ku xaqiijin karto inaad tahay qof jira oo nool oo waliba naf ay ku jirto.
“Si aynnu u guulaysanno ugu horrayn waa in aynnu aaminnaa in aynu guulaysan karno.” – Nikos Kazantzakis
Guusha waxay leedahay sharciyo la maro, mid kamid ah sharciyada ugu muhiimsan waxaa kamid ah inaad aaminsan tahay inaad guulaysan karto.
Waxaa jirta xikmad uu yiri qoraagii reer Gariiga ahaa Nikos Kazantzakis,
“Si aynnu u guulaysanno ugu horrayn waa in aynnu aaminnaa in aynu guulaysan karno.”
Inaad dedaasho oo kali lagaagama baahno waxaad kaloo u baahan tahay inaad taqaano halka aad u socoto iyo goorta aad rabto inaad gaarto.
Wayna adagtahay in aad si sahlan aad u hesho xaqiiqda dhabta ah iyo dhammaadka guusha. Waxaa muhiim ah in aad taqaano hadafkaaga waayo hadafka waa salaanka nolosha iyo meesha aad usocoto. Yoolkuna waa dhammaadka hadafka.
Waxay kuu fududaynaysaa hadafka in aad meeshaa utabaabushaysatay aad gaarto welwel la’aan. Dadka guulaysata waxay leeyihiin dhaqan iyo astaamo aad u fara badan dhaqamadaas ayaa u hor seedo in ay naftooda horumar gaarsiiyaan, kadibna caalamka wax kusoo kordhiyaan.
Muhiimadda ayaa ah in aad taqaano barta iyo madasha aad u sadcaalayso.
“Naftaada markaad ku kalsoonaato ayaa hiigsan kartaa waxaad rabto, waana furaha ugu muhiimsan ee guusha noloshaada.”
Haddii aad shalay ahayd ‘sanadkii hore’ 10 jir maanta waxaad tahay 11 jir. Marwalbo oo sanad kuu kordha waxaa isbedelaayo noloshaada, sidda qaab dhismeedka jirkaaga, koritaankaaga, wajigaaga, garaadkaaga iyo waliba inaad fahanto waxwalbo oo adiga kuugu heeraarsan. Waana fara kutiris dadka nolosha fahma sababaha ay u noolyihiin.
Hadaba dad badan waxay raadinayaan sidda ay nolosha isbedel ugu sameyni lahaayeen. Si aad nolosha isbedel joogta ah ugu sameyso waxaad u baahantahay hal shey oo kali in lagaa helo. “tallow waa maxay?” haddii lagaa helo sheygaasi nolosha waad guulaysatay, laakiin haddii lagaa waayo waad guuldaraysatay. Sheygaasi waa han-weynida.
Dr. Tony Campolo ayaa sheegay daraasad laga sameeyay 50 qof oo da’dooda kor u dhaaftay 90 sano oo rag iyo dumarba leh ayna sameeyeen aqoonyahanno cilmiga bulshada. Wuxuu sheegay in waayeel kaas la weydiiyay “Haddii noloshaada dib loo celin lahaa, maxaad ka beddeli lahayd?” su’aashaas waxay ahayd su’aal furan oo jawaabaheedu kala duwanaan karaan. Haseyeeshee, jawaabaha waayeelku ka bixiyeen waxay noqdeen kuwa isku mid ah waxayna ku jawaabeen:
Waan fekeri lahaa oo hadba xaaladyda qiimayn ku samayn lahaa.
Siddii horre si ka badan ayaan khatar ugu bareeri lahaa. Waxaan ifka kaga tegi lahaa wax iga dambeeya.
Waayeelkaas waxay dhammaan ka shalaayeen in sida ay u fekeraayeen yaraantoodii aysan ahayd mid u hagtay dhanka himilooyin ay lahaayeen iyo in feker la’aantoodu ay gayaysiisay in aysan gaarin hadafkooddii. Waxay isku raaceen in ’waa fekeri lahaa! Macnaheedu yahay ”tallaabo kasta oo aan qaadayo waxaan ka dhigi lahaa mid ii jihaysa waxyaabaha noloshayda macnaha u sameeya intii aan siddii bilaa macno daro u socon lahaa”
Halkaas, waxaanu ka baran karnaa in qofka inta ay goor tahay maskaxdiisa si fiican ugu shaqeysiiyo. Siddoo kale waxaan kaloo arki karnaa in qof walbi nolosha uu noolyahay aysan ka fogayn sidda uu u fekeraayo, waayo,
Soomaalida waxay tiraahdaa ”ninna maankiisa ma saluugo”
Waxaan qoraalkeyga gaaban ku soo koobayaa inta ay goor tahay wakhtigaaga iyo noloshaada ee aad maanta fursada u heshay waliba aad haysato caafimaad ka faa’idayso. Waxaana jiri doonto wakhti tabartaada iyo garaadkaaga hoos u dhac ku imaan doona ee maanta ka faa’idayso xooggaaga iyo caqligaaga.
Iskana illaali inaad naftaada qiyaanto, maxaa yeelay daacadnimada waa tilmaan ka mid ah tilmaamaha ay leeyihiin dadka guulaysto waxay daacad u yihiin naftooda, dadkooda iyo dalkooda. Ma khiyaamaan dadkooda maxaa yeelay waxay ogsoon yihiin in khayaanada ay kusoo dul noqoto khaa`inka naftiisa.
Tags: Cidna Haka Sugin Inay ku Dhiiro GelisoSababtoo ah Waa Masuuliyad Ku Saaran!
Next post Ha isdhiibin, Yaanu Ku Xukumin Qof Aan Aqoon Kuu Lahayn!
Previous post Kafeega Caafimaadka Ma U Fiican Yahay?!